トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Waayo, dad doonaya in ay miisaamaan ee dheeraadka ah, model rakibaadda iyo qaabeynta model qowladda pachinko ah
Waxaad tahay, waxaan u baxay inuu ka qowladda pachinko a, waxaan u malaynayaa in doorashada play ah lagu daydo eegto dukaan oo dhan marka hore. Sidaas daraaddeed, haddii aad isku daydo inaad ku guuleysto waa, in aan ka ciyaaro lagu daydo wax kasta, dukaamada of model isku darka wax kasta oo ay sii wadi doonaan in ay eegaan sida ay u wanaagsan. dukaanka Pachinko, laakiin waxay leeyihiin noocyo kala duwan oo lagu daydo, oo qayb ka ah in aan doonayo in aan xaqiijin ugu wanaagsan, waa in aad hit weyn.
hadda, pachinko labada Afyare, maxaa yeelay, majaladda ayaa ka soo baxay wax badan, isku day inaad si loo hubiyo ka hor doonayaa inuu ciyaaro. itimaalka Ghanna
, ka jaaniska hit weyn ayaa la sheegay in lagu daydo sare ee Creech sare, noocyo kala duwan oo ilaa model ah ee jaaniska yar yahay in la sheegay in ay Dejihane. Waayo, Afyare, sida ay goob, waxaa jira ixtimaal ah in loo gudbiyo sida qeybsataan farsamo.
waxa aad rabto in aad noocee ah sida loo ciyaaro, waxaan kala duwan ee lagu daydo in ay doortaan soo baxa, jaaniska ugu fiican ee lagu talinayaa Pachinko waa model ah kaas oo la sheegay in ay noqon Details nooca dhexe. caddaymaha nooca Dhexe, noqon lahaa booska dhexe ee jaaniska Ghanna ee Creech sare iyo Dejihane ah.
Dejihane ku filan, laakiin ma jiraan wax sahlan in la garaaco, sida Creech sare, ma qayb xataa dhagan caadaysatay waa, waxaan ula jeedaa in maal-gashiga ayaa sidoo kale ka yar mar hore, Ku Guuleysatay sidoo kale la filayaa waa in pachinko ah. Waa waxa ay guul weyn oo iyaga waxaa la jiray haddii Creech sare waxaa lagu talinayaa, laakiin tan iyo markii la qabatimo sidoo kale waa weyn yahay, waxaa suuro gal ah in kor u kacda maal-barar weyn, waxaa sidoo kale looga baahan yahay u diyaar ah guuldarro weyn.
Dejihane iyo cay, Ghanna si degdeg ah u tiimban doontaa, laakiin heshay yar yahay iyo waa fiican haddii ujeeddadu ay tahay ciyaar, ma ku haboon yahay haddii aad rabto inaad ku guuleysato.
By habka, Afyare waxaa ku dhowaad dhigay 1 of miiska ee qowladda pachinko ah. Waxa kale oo jira waa doonistii marka goobaha dhexe ayaa sidoo kale soo galay dhowr gaari si ay u kubad u muujiyaan baxay, laakiin 6 dejinta, waxaan u maleynayaa in si fiican aan ku fikiray in yar oo soo galay ganacsiga caadiga ah waa.
Sidaa darteed, taxadar waa mishiinka kala tagno in ay dhacdo dejinta 1. The u dhaw in mashiinka lagu qoray 100 boqolkiiba ee la ballamay 1, fududaan doonta in la soo jiid xaddiga maal waa gunno yar. Waxa intaa dheer in Afyare, A Mashiinka T iyo mashiinka ART iyo mashiinka caadi ah, ama u eg, oo sidoo kale soo baxay farqiga u ah cayimidda. Mashiinka caadiga ah, anigoo goor wanaagsan kuwii la shaqayn RT, kala mashiinka ee Jidka waxaa lagu wadaa 1, waxaa jira isbeddello ah wax yar ka sareeya.
bilowga ah waa, mashiinka caadi ma aha faahfaahinta ka mid ah RT, iwm oo aan faragelin kasta oo farsamo sida isha riix waxaa lagula talinayaa. Pachinko labada Afyare, laakiin ma jirto hab sida xaqiiqada ah ku guuleysto, waxay u baahan yihiin maal-yar, waxa muhiim ah in aad doorato ciyaar fudud si ay u qaabeeyaan guul sidoo kale la filayaa. Laga soo bilaabo ka mid ah
ka ciyaaro fudud si ay u qaabeeyaan, akhri ruxruxo of mishiinka in laambad xogta, iyo loo ogaado mid ka mid ah si ay u maal, sidoo kale waxa uu kor u kici doono boqolkiiba aad ku guuleystay badan ku Daynanaa Iyagoo ku ciyaaraan. Ka dib markii in, iyo model, kuwaas oo ka hor ku guuleystay, haddii Kaalaya soo xulay nadaam aan doonayaa inaan ciyaaro, waxaan u maleynayaa ama ma dheeraad ah si ay ugu raaxaystaan ??pachinko ah.
Haddii aad rabto butukha ah, dooro rakibo dukaan ah Details nooca dhexe ee inta badan, in kiiska halkaas oo Afyare, dooro dukaanka aad dhigay 1 of mishiinka kala jabeen jiraan noocyo badan oo ku dhow inay 100%, ku riyaaqayaa noocyo kala duwan oo lagu daydo Fadlan ka eeg.
in ay sidoo kale ku guuleysto waa muhiim, laakiin trick ah in ay tahay in madow ah dheelitirka ah in uusan mar dambe lumin. Haddii aad tahay user sare, waxaan rajeynayaa in xitaa haddii loogu talagalay daryeelka ee Creech sare iyo aad u badan, dadka doonaya in ay ka macaashaan muddo ah dheelitirka, waxaa lagu talinayaa in aad ku socotaan oo ku saabsan mawduuca ah in aadan lumin ka badan badisay. Oo daydo in abid ku guuleysatay ka hor, haddii Kaalaya soo xulay nadaam aan doonayaa inaan ciyaaro, waxaan u maleynayaa in ay sii noqon lahaa raaxaysan pachinko ah.
in ay sidoo kale ku guuleysto waa muhiim, laakiin trick ah in ay tahay in madow ah dheelitirka ah in uusan mar dambe lumin. Haddii aad tahay user sare, waxaan rajeynayaa in xitaa haddii loogu talagalay daryeelka ee Creech sare iyo aad u badan, dadka doonaya in ay ka macaashaan muddo ah dheelitirka, waxaa lagu talinayaa in aad ku socotaan oo ku saabsan mawduuca ah in aadan lumin ka badan badisay.